Xog Qarsoon: Dhulka Dugsiga sare Ee Howlwadaag In la Dhisto Yaa leh Mas’uuliyadeeda. | Ceel Cade News
Xog Qarsoon: Dhulka Dugsiga sare Ee Howlwadaag In la Dhisto Yaa leh Mas’uuliyadeeda.
ilo Wareedyo Lagu Kalsoonyahay ayaa inoo sheegay Dugsiga Sare ee Degmada Howlwadaag in uu Bixinteeda lahaa Madaxweynihi hore Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud waxaana laga Iibiyey Bankiga Dahab shiil waxayna dhismo ku bilaabeen Dugsiga Sare ee Howlwadaag ee ka ak dhawaa Degmada Holwadaag.
Dhulka dugsiga sare Howlwadaag waa 40 boos waxaana dhismo ku bilaaway shaqsiyaad ayagoo ka dhiganaayo deegaan hase ahaate yaa masuuliyada dhulkaas in la bixiyo lahaa.
Madaxweynahii Hore Soomaaliya Xasan shiikh Maxamuud ayaa dhulka dugsare howlwadaag ku badashay 130 boos oo ku yaalo Deegaanka Jasiira dhulkaa oo la hayeen shaqsiyaadka uu kaga badashay dugsare howlawadaag oo Gaarayo 40 boos.
Hadaba Degmada howlwadaag malah dugsi sare waxaana ugu soo dhow km5 waxaana dhulkaan horay looga qaaday shaqsiyaad waxayna dowlada dhexe ka dhigtay dan guud si loogu fuliyo bulshada wax ay ku qanci karaan.
Sikastaba Waxaana waajib ah in laga hor tago in la dhisto dhul degmo dhan u ah dugsi sare Waxaana leys weydiinayaa Madaxweyne Xasan shiikh oo ah aqoon yahan wax ka agaasimay waxbarashada dalka inta uu ku jiray bur burkii ka dib in uu saxiixo dhul dugsi sare ah ee dan guuda.
Dhismaha iyo howlaha laga wado Dugsigi sare Ee Howlwadaag ayaa lasoo sheegayaa inay gacanta kula jiraan Rag Ganacsato ah ay Masuul uga tahay Bankiga Dahabshiil waxayna wadaan boob xoogan oo lagu doonayo in gabi ahaanba si sharci daro ah lagu dhisto Dugsigi sare Ee howlwaadag.
Dhismahaan ayaa weli waxaa ka taagan Muran xoogan hase ahaate Muranka ayaan ka imaanaya Odayaasha iyo dadka degan degmada howlwadaan kuwaas oo caruurtooda wax ku bartaan Dugisa sare ee sida sharci darada ah lagu dhisanaayo.
Odayaasha ayaa waxay sheegayan in ay tahay sharci daro dhismaha ay halkaan ka wado bankiga dahabshiil waxayna ugu baaqayaan Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Abdirahman Cumar Cusmaan In uu arintaas soo fara galiyo hadii ay dhismahan sii wadaan dahabshiil waxaan diyaar u nahay inan la dagaalano waxayna Aad u cabaareyeen Gudoomiyaha Howlwadaag kaas ay ku tilmaameyn mid aan waxba kala socon dhismahaan ay dahabshiil ka hirgalineyso Dugsiga sare ee Degmada howlwadaag.
Howlaha ka socda ee Dhismaha dugisa sare oo aan wax fasax loo qabin ayaa waxaa si awood ah u wada maamulka Dahabshiil waxaana la ogeyn in Gudoomiyaha Howlwadaag oo ku lug leeyahay maadama aytahay degmadiisa meesha ay dhismaha ka socda.
Gudaha Dhismaha ayaa waxaa ku sugan dadka dagan deegaan iyo Odayaal ka tirsan degmada howlwadaag oo si dardar ah u wada howsha dhisme ee laga wado dugsiga sare in la hakiyo si dhismahan loo dhameestirin sidoo kale Dahabshiil ayaa dusha u ridan doonto dhibka iyo isku dhaca ka dhaca dhismahaan sidaa waxaa yiri Mid ka mid ah odayaasha deegaanka.
Hase ahaaate Howlaha Dhismaha oo horay loo hakiyay ayaa waxaa dib si qarsoodi ah loogu bilaabay muddo ka yar bil, iyagoo usoo maray Gudoomiyaha degmada Holwadaag Wali wax war ah kama soo saarin Gudoomiyaha Waxayna cadeyneesaa in wax badan kala socdo gudoomiyaha.
Maamulka Gobalka banaadir ayaa dhismahaan iyo howlaha ka socda Dugsi Sare ee howlwadaag arrintaan u muuqata in aysan waxba kala socon Sidoo kale Dowlada Somalia ayaan ku baraarugsaneyn howlaha dib uga bilowday Dhismahaan oo uu khilaaf heerkiisu sareeyo ka taagan yahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan la ogeyn fal celinta ay la imaan doonan Maamulka Gobalka Banaadir ee dhismaha Dahabshiil ka wado degmada howlwadaag